डिस्कोभित्र लोकमानको नाममा डाङ्डुङ् - inaruwaonline.com
डिस्कोभित्र लोकमानको नाममा डाङ्डुङ्
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन १९, २०७३ समय: २:१४:०४
काठमाडौं । मान्छे शक्तिले मैमत्त भएपछि शर्म पचाएर जे पनि गर्छ भन्ने कुरा फेरि पनि चरितार्थ भएको छ, असोज १० गते, राति, ठमेलको डिस्कोमा ।
अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको रवाफ लगाउँदै डिस्कोभित्र बाउन्सर र युवतीमाथि दुव्र्यवहार गर्दा लोकमानका बडिगार्ड डिएसपी दानबहादुर थापा मध्यरात भागाभागमा मात्र परेनन्, ठूलो दुर्घतनाबाट पनि बाँचे ।
घटनामा अख्तियार स्वामित्वको बा१च् ९५५९ नम्बरको स्यान्ट्रो गाडी ध्वस्त छ । ठमेलस्थित होटल मस्र्याङ्दी अगाडिको (पहिलाको निश्चल हल) सिएनआई क्लब (ष्स्किो) मा झगडा भएको खबर पाएर सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको टोली नयाँ बजारबाट त्यसतर्फ हुँइकियो । तर, प्रहरी पुग्दा आफू लज्जित हुनुपर्ने कारण दानबहादुर साथमा रहेकी युवतीसँगै त्यहाँबाट भागे ।
उनीसँग नेपाल प्रहरीकै अर्का एकजना डिएसपी पनि साथमा थिए । त्यस सातको कुटाकुटबाट घाइते भएका दुई युवती नजिकैको मनमोहन अस्पतालमा भर्ना भई भोलिपल्टै डिस्चार्ज भए ।
भाग्दै दरबारमार्गतिर हुँइकिएका दानबहादुरको गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घतनामा प¥यो । गाडी कच्याककुचुक छ । तर, मान्छेलाई केही भएको छैन ।
घटना भएको ९ दिन बितिसकेको छ । तर अख्तियारको आम्दानीमा बाँधिकएको बा१२ च ९५५९ नम्बरको गाडी कहाँ छ? कसैलाई पत्तो छैन । भोलिपल्ट अख्तियारमा उक्त गाडीको खोजी भयो । दानबहादुरले एकजना इन्जिनियरलाई सुनाए, ‘राति हल्का टोकिएर बनाउन दिएको छु ।’
ठमेलभित्र, अख्तियारमा लोकमानको सुरक्षा र सुराकी दुवै प्रयोजनामा खटिएका डिएसपीका कारण बबाल भएको खबर प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालकहाँ पुग्यो । हल्लिखल्लि भएपछि उपेन्द्रले छानबिन गर्न निर्देशन त दिए ।
रमाइलो कस्तो छ भने अहिले हेडक्वार्टरभित्रको एउटा निरिह युनिट दानबहादुरको यो काण्डशारे बानबिन गरिरहेको छ । तर, त्यहिँभित्रको सबभन्दा बलियो मानिने युनिट भने घटनालाई सामसुम पार्न सक्रिय छ । अर्थात, देखाउनका लागि छानबिन गर्ने तर कारबाही नगर्ने योजना !
घटनालगत्तै केही प्रहरी अधिकारीले सोह्रखुट्टे वृत्तका डिएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरसँग यसबार सोधे । तर, उनको टोली पुग्दा दानबहादुर नभेटिएको तर उनी घटनाको सुत्राधार भएको पत्ता लगायो ।
उता, अख्तियारभित्र दानबहादुरको अर्को आतंक छ । लोकमान क्यानडा हिँडेपछि मैंमत्त भएर ठमेलमा घटना गराएका उनले अख्तियारभित्रै नेपाल टेलिकमको सिस्टम जडान गराएका छन्, जसबाट मानिसको कल डिटेल्स छिनछिनमै हेर्ने गर्छन् ।
त्यसरी टेलिकमको सिस्टम अख्तियारभित्रै जडान गर्नुको कारण हो, राजनारायण पाठकबाहेक सबै आयुक्तका कल डिटेल्स लिने, एसएमएस उतार्ने र लोकमानलाई जाहेर गर्ने ।जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ।